2010 | Myanmar Mp3 Album
Stone Sour – Hell & Consequences.mkv
Happy New Year!!!!!!!!!!!!! Link
December 31, 2010 DsS International Artist MTV Stone Sour 1 Comment
December 31, 2010 လူသား Asian Artists (K,C,J,T) 1 Comment
Chrishan – Man Of The Year Mixtape1(2010)
Let us celebrate new year (2011) with R N B exclusive songs. L>ownload
December 31, 2010 mars International Artist New International Albums Chrishan Leaveacomment
စံလင်း – ရွှေကဗျာ
ဘက်မဲ့ရင်ခုန်သံ လလုံးကြီးအောက်(ခ) ရွှေကဗျာ အိပ်မက်ကျောက်ဆောင် မနစ်ချင်ဘူး ခြားနားလို့ထား ခဏခဏ သဲပွင့်တစ်ပွင့် လလုံးကြီးအောက်(က) အမှိုက်တစ ဒါလုပ်စရာလား ထုံးစံအတိုင်း အက်ကြောင်း သီချင်းနာမည်လေးမျာ;ပေးပို့သော [email protected] အားMMA သီချင်းချစ်သူများကိုယ်စားကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
December 29, 2010 Yee Wai Aung အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) စံလင်း7Comments
(Indie Rock) The Decemberists -^- The King Is Dead (320 Kpbs)
December 29, 2010 လူသား International Artist New International Albums The Decemberists Leaveacomment
အယ်ဒီကျော် သတ္တုခေတ်အလွန် ၁။ တစ်ကပြန်စမယ် ၂။ ဘာကြောင့်များ ၃။ ဇာတ်မျောကြီး မကချင်ပါ ၄။ အဆိုးမြင်သမား
December 28, 2010 thorta အခွေ (တကိုယ်တော်) အယ်ဒီကျော် ၀ါသနာရှင် အခွေများ Myanmar Underground Unreleased Albums2Comments
John Bon Jovi -^- These Days (320 Kpbs)
December 27, 2010 လူသား Bon Jovi International Artist New International Albums Leaveacomment
နွဲ့ယဉ်ဝင်း – သီချင်းမရှိလျှင်အချစ်မရှိ
နွဲ့ယဉ်ဝင်း – သီချင်းမရှိလျှင်အချစ်မရှိ (၄၅) နှစ်ခရီး စုံတွဲအဆို – စိုးပိုင် ၊ ဘိုဖြူ ၊ သံသာဝင်း ၀၁ ဒေါသစိတ်ကလေး ၃၆၀ မိနစ် ၀၂ မိရွှေသဲ ၀၃ မနဲ့မောင် ၀၄ အင်းယားကမ်းကအကြော်ဆိုင် ၀၅ ချယ်ရီပန်းလေးအသည်းပေးမယ် ၀၆ ပန်းကမ္ဘာမျှော်စင် ၀၇ ချစ်သူတို့ဘ၀၀ယ် ၀၈ မျှော်လင့်နေတုန်းပျို့ဘုန်းလှမ်းခဲ့ပါ ၀၉ ဒီအချိန်ကစ …. ၁၀ ပြန်ပြောင်းလို့ရမလား ၁၁ အချိန်က ၂၄ နာရီ ၁၂ အခိုက်အတန့် ၁၃ သီချင်းမရှိလျှင်အချစ်မရှိ ၁၄ Before we say goodbye (BonusTrack) http://www.mediafire.com/?982j0lmdoknrcpb credit to axlerose www.mmcybermedia.com
December 27, 2010 swordfish နွဲ့ယဉ်ဝင်း New Myanmar Albums5Comments
လိမ္မော်သီး – လိမ္မော်ရောင်စိတ်ကူးများ
လိမ္မော်သီး – လိမ္မော်ရောင်စိတ်ကူးများ The Trees ၀၁ လွဲမှားခြင်း ၀၂ ကိန္ဒရာချောင်းခြားအမှာစကား ၀၃ မင်းရဲ့အဝေးဆုံးမှာ ၀၄ အိပ်မက် ၀၅ မရပ်မနား ၀၆ ချစ်ဦးမေ ၀၇ လိမ္မော်ရောင်စိတ်ကူးများ ၀၈ ရှိဖို့သင့်တယ် ၀၉ သတ္တိမရှိရင်နေခဲ့ ၁၀ နှုတ်ဆက်တဲ့နေ့ ၁၁ ချစ်သလိုမုန်းသလိုလာမလုပ်နဲ့ ၁၂ လိမ္မော်ရောင်စိတ်ကူးများ (unplugged) http://www.mediafire.com/?247ovt8y3pow537 credit to axlerose www.mmcybermedia.com
December 27, 2010 swordfish အဆိုတော် (မ) လိမ္မော်သီး New Myanmar Albums2Comments
အဆိပ်တက် အိပ်မက် – အာဇာနည်
01 ၁၆နှစ် နတ်သမီး 02 ရော့ခ်စတား 03 မလွမ်းချင်ဘူး 04 အမေ့အတွက် 05 ဟောလီးဒေး 06 မှန်ကန်တဲ့လမ်း 07 အချစ်လား 08 အဆိပ်တက်အိပ်မက် 09 မဝေးဘူး 10 အချစ်တန်ခိုး 11 နူးညံ့ခြင်းမရှိသူ 12 ညငှက် 13 မဆွေးချင်ဘူး
December 26, 2010 လူသား အဆိုတော် (ကျား) အခွေ (တကိုယ်တော်) High Quality Albums New Myanmar Albums Rဇာနည် 18 Comments
Top Techno Dance Song
December 26, 2010 လူသား International Artist Various International Artists Leaveacomment